राजनीति Archives | Page 28 of 29 | Daily State News
तालमेलले राम्रो परिणाम ल्याउँछः दाहाल
चितवन— प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनमा हुने तालमेलले राम्रो परिणाम ल्याउने बताएका छन्। भरतपुरको केन्द्रीय बसपार्कमा आयोजित काँग्रेस(माओवादी संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले तालमेलको विरोध हुने गरे पनि त्यसले राम्रो परिणाम दिने दाबी गरेका हुन्। ‘गठबन्धनको पहिला पनि आलोचना हुने गरेको थियो। तर त्यतिबेला पनि गठबन्धनले काम गरेको थियो’, उनले भने, […]
भरतपुर महानगरमा केपी ओलीको गर्जन- लम्पसार पर्दा सत्ताधारीको घुँडाभरि घाउ !
कांग्रेस कार्यकर्तालाई झोक्राएर नबस्न आग्रह २८ बैशाख, चितवन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेशीका अघिल्तिर लम्पसार पर्दा-पर्दा सत्ताधारी दलका नेताहरुको घुँडाभरि घाउ नै घाउ भएको टिप्पणी गरेका छन् । भरतपुर महानगरपालिकामा एमाले चितवनले गरेको वृहत चुनावी सभालाई सम्वोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने- ‘राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई कमजोर बनाउन परिएको लम्पसारले उनीहरुका घुँडामा […]
यस्ता छन् स्थानीय तहमा दलहरुले उठाएका महिला प्रमुख
काठमाडौ, बैशाख २८– बैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन दलले कति महिला उम्मेदवार बनाए भन्ने बहज जारी नै छ । संविधानमै प्रमुख र उपप्रमुखमा एक जना महिला अनिवार्य गरेपछि यो बहस सुरु भएको हो । यसपटकको उपप्रमुखमा सबै राजनीतिक दलहरुले महिला नै उठाएका छन् । तर, २ सय ८३ मध्ये थोरै मात्र संख्यामा […]
छोरीलाई भोट माग्दै प्रचण्डले भने- झिनो मतले जित्ने छुट छैन
२८ वैशाख, चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भरतपुरमा एउटै मञ्चमा उभिएर संयुक्त गठबन्धनलाई भोट मागेका छन् । भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादीले चुनावी तालमेल गरेका छन् । कांग्रेसले मेयरमा माओवादी उम्मेदवार रेणु दाहाललाई समर्थन गरेको छ भने उपमेयरमा माओवादीले कांग्रेसकी पार्वती शाहलाई समर्थन गरेको छ । चुनाव प्रचारको […]
काठमाडौ, बैशाख २७ – एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ दल कांग्रेस –माओवादीले कानुनी राजको उपहास गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार एमाले प्रचारप्रसार विभागले काठमाडौमा गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले कानुन दिवसका अवसरमा हिजाे प्रधाननयायाधीशले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रमलाई बहिस्कार गरेर कानुनी राज्यको उपहास गरेको आरोप लगाए । सभामुखमाथि ओलीको हमला अध्यक्ष ओलीले भने ‘भुलचुकमा […]
एमालेलाई गगन थापाले भने-प्रदेशको चुनाव पनि प्रतिपक्षमै बसेर लड्नुपर्छ, चित्त नदुखाउनुस्
२७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा पनि नेकपा एमाले प्रतिपक्षमै रहने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस चुनाव प्रचार उपसमितिले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा थापाले तत्काल एमाले सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना नरहेको बताएका हुन् । ‘सरकार बनाउनलाई अंक गणित पनि मिल्नुपर्छ । सांसद पनि चाहिन्छ,’ थापाले एमालेतर्फ लक्षित […]
राजधानीको चार कुनामा स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय, कहाँ-कहाँ बन्दैछन् नयाँ शहर ?
२५ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले राजधानीको चार कुनामा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजधानीको चारै कुनामा चार वटा स्मार्ट शहर विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो । शहरी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक क्षेत्रबाट १०० अर्ब र निजी क्षेत्रबाट ४०० अर्ब लगानी जुटाएर स्मार्ट सिटी बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । […]
दोस्रो चरण चुनाव हाम्रो नेतृत्वमा : एमाले
एमाले सचिव एवं प्रवक्ता योगेश भट्टराईले माओवादी केन्द्र–कांग्रेस गठबन्धन सरकार स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावसम्म कायम नरहने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार अन्तिम अवस्थामा पुगेको दाबी गर्दै उनले स्थानीय तहको दोस्रो चुनाव एमालेको नेतृत्वमा हुने बताए । ‘दोस्रो चरणको चुनाव एमालेले नै गराउने संकेतहरू देखिएका छन्’, एमाले प्रचार विभागद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित […]
खोलेसिमल, चितवन २५ बैसाख । नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले देशैभर विजय हुने सुनिश्चित रहेको बताएका छन् । एमालेको राष्ट्रियता र विकासको अग्रगामी नीतिका कारण स्थानीय निर्वाचनमा भारी बहुमतका साथ एमाले विजय हुने उनले बताए । नेकपा एमाले कालिका नगर कमिटीले आज कालिका ६ क्लवचोकमा आयोजना गरेको […]
जेठ १५ मा कामचलाउ बजेट ल्याउन तीन दल सकारात्मक
२५ बैशाख, काठमाडौं । नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरी जेठ १५ मै कामचलाउ बजेट ल्याउन प्रमुख तीन दलबीच भएको सकारात्मक भएको नेताहरुले बताएका छन् । साथै दोस्रो चरणको चुनाव पूर्वघोषित मितिमै हुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आइतबार अबेर भएको छलफलमा महाअभियोगका साथै बजेट, मतगणना र दोस्रो […]
राप्रपा बाहिरिँदा गच्छदारलाई लट्री : तीन मन्त्रालयसहित आज सरकारमा सहभागी हुँदै
काठमाडौं, बैशाख २५– नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार सरकारमा जाने निश्चित भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय तीनकुनेमा आज बसेको केन्द्रीय सम्पादन समिति र संसदीय दलको बैठकले सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएको सहमतिअनुसार गच्छदारले उपप्रधानसहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पाउने छन् । यसको साथै पार्टीले संस्कृति तथा […]